सिक्किमकी नेपालीभाषी अपराजिता राईको भारतभरी चर्चा भएको यो सफलता – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सिक्किमकी नेपालीभाषी अपराजिता राईको भारतभरी चर्चा भएको यो सफलता
सिक्किमकी नेपालीभाषी अपराजिता राईको भारतभरी चर्चा भएको यो सफलता
नयाँदिल्ली । भारतकी नेपाली भाषी अपराजिता राई सिक्किममा कुनै नौलो नाम होइन । उनी सन् २०१० र २०११ को संयुक्त सामान्य प्रशासन सेवाका परीक्षामा सामेल भएकी थिइन् । उक्त नागरिक सेवा परीक्षामा उनले उच्च पद हासिल गरेकी थिइन् । सिक्किममा उच्च पद हासिल गर्ने उनी नै पहिलो महिला उच्च अधिकारी हुन् ।
उनले ट्रेनिङ्गको दौरान आइपिएस ट्रफि हात पारिन् । उनलाई लेडी आउट डोर प्रोवेशनरको सम्मान दिइयो । त्यस्तै पश्चिम बंगालको ५५ व्याच अन्तर्गत सिनियर कोर्ष अफिसर ट्रफि, मैदानी जंगको श्री उमेश चन्द्र ट्रफि पनि उनले पाइन् ।
अपराजिताको सफलता यतिमा मात्र रोकिएको छैन । अपराजितालाई राजधानी नयाँ दिल्लीमा देवी अवार्डले सम्मानित गरियो । गत १३ नोभेम्बरको दिन नयाँ दिल्लीमा द सन्डे स्टेन्डर्ड मिडिया हाउस द्वारा उनलाई उक्त पुरस्कारले सम्मानित गरिएको हो। देवी अवार्ड देश भरीका १० महिलाहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत दिइने गरिन्छ। वर्तमान समयमा सुश्री अपराजिता राई कोलकातामा कोलकाता पुलिस विभागमा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरको पदमा कार्यरत छन्।
अपराजिताको सफलताको कथामा परिवर्तनको लागि उनमा रहेको धैर्य, निश्चितता र प्रेरणा लुकेको छ । राई एउटा शिक्षित परिवारमा हुर्केकी हुन् । उनका पिता वनजंगल संरक्षण गर्ने कर्मचारी थिए भने आमा स्नातक शिक्षिका हुन् । ८ वर्षको कलिलो बालिका रहँदै उनको पिताको मृत्यु भएको थियो ।
अहिले अपराजिता सरकारी ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरु जो सर्वसाधारणको सानो भन्दा सानो काम गर्दै आइरहेका छन्, त्यसमा सजगता नअपनाएको महशुस गरिरहेकी छिन् । त्यसैकारण उनको चाहना आफू सानो पदमै बस्ने छ । उनी सानो कामको कार्य सम्पादन मै समेटीन चाहन्छिन् ।
एउटा स्थानिय समाचार संस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छिन्,“मसँग सम्पर्क राख्ने आम मानिसले आफ्नो समस्यामा त्यति चिन्ता र झन्झट मान्नुपर्दैन ।” विद्यालयमा उनी अध्ययनशिल थिइन । उनको सिक्किममै उनले सवैभन्दा उच्च अंक हासिल गरेकी थिइन् ।
आइ. एस. सि. को परीक्षा नतिजामा उनको अंक ९५ प्रतिशत थियो । बोर्ड परीक्षामा उनको कार्यशैलीलाई मध्यनजर गरेर ताशी न्यामग्याल एकेडेमीले अपराजितालाई वेष्ट गर्ल अल राउण्डर श्रीमती रत्न प्रदान मेमोरियल ट्रफि प्रदान गरेको थियो ।
अपराजिताको विद्यालयको शिक्षा समापन भएपछि उनी नेशनल एडमिशन टेष्ट र बीए एल एल बी परीक्षाको लागि २००९ मा पश्चिम बंगाल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको कानून विज्ञान कोलकातामा भर्ना भइन् ।
उनी नागरिक सेवा २००९ को परीक्षामा सामेल भइन् तर पनि उनले यसमा सफलता भने हासिल गर्न भ्याएकी छैनन् । उनले सन् २०१० मा सीएसइ परीक्षा ७६८ तहमा नतिजा आएको छ । उनले २०११ र २०१२ मा फेरी परीक्षा दिइन् जसमा उनको नतिजा ३५८ तहमा सीमित भएको छ ।
उनी एकपटक परीक्षामा अनुतीर्ण भएर के भयो त ? अपराजिताले आफ्नो लक्ष्यको लागि सामना गर्नैछ र उनले सफलता पनि हात पार्ने नै छिन् । यसैले अहिले विश्वभरी छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरुले अपराजिता सफलताको एक प्रेरक स्रोत भन्दै यो सफलताको कथा सेयर गरिरहेका छन् । (एजेन्सीबाट)
भक्तपुरमा घरभित्र एकै परिवारका तीन जनाको मृत अवस्थामा फेला, कुकुर पनि मरेको अवस्थामा भेटियो
प्रहरी बन्ने हो ? पाँच हजार भन्दा धेरै जवान भर्ना गरिँदै, यहाँ दिनुहोस् निवेदन
ओली–नेपालसँग प्रचण्डको आग्रह : कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव रोकौं